Shiinaha midab xoog leh warshad bacda ciida iyo alaableyda | Feiqing
Bac midab adag oo midab leh
Shandada Sandman ee adag waa sandbag cusub oo qaabeysan oo caan ku ah tababarka jimicsiga.
Waad u adeegsan kartaa inaad qaadid, sameyso xoogaa tababar culus, halkii aad kaheli laheyd kubad culus ama dhagax.Bandhigan ciida ee adag ayaa la qaadan karaa, waxaad ku tababaran kartaa meel kasta, sida guriga, xeebta, jardiinada, beerta iyo wixii la mid ah. Waad buuxin kartaa ciid, dhagax jebin, hadhuudh .... si aad miisaanka u hagaajiso.
Shandad kasta oo adag oo adag oo leh dahaadh, oo ka samaysan maaddo 100% naylon ah, 1050D Cordura, YKK ZIPPER, dun adag oo leh 3 tolmo. Bacda wax lagu buuxiyo ee leh velcro laba-laab ah si looga fogaado ciidda dhacda marka tababarka la sameynayo. Waxaan sidoo kale ku tolannaa furmo furitaan ah, waxaad furi kartaa masraxa si deg deg ah oo fudud. Jiinyeer YKK oo ku yaal furitaanka qolofka si ay uga dhigto jawaanka ciidda mid adag oo aan jabi karin marka la isticmaalayo, waxay ka dhigeysaa damaanad adag jawaan ciideed mid ka dheer jawaanada caadiga ah.
Dammaanad qaadka sandbag ee adag: Maxay yihiin waxyaabaha aad ku buuxinayso boorsada? Xagee tababar ku qaadan doontaa bacda? Sidee loo sameeyaa tababarka bacda? Waxay saameyn ku yeelan doonaan damaanad-qaadka sandbag-adag. Waxaan u soo jeedineynaa tababarayaashu inay ku tababaraan dabaqa caagga ah, dabaqa leh ciid jilicsan ...., waxay ka dhigi kartaa dammaanad dheereyn. Qalabka bacda adag ee adag waa dhar, ka wanaagsan in la doorto ciid jilicsan oo qulqulaysa ama ciid bir ah si loo buuxiyo. haddii buuxinta waxyaabaha adag, sida dhagaxa adag, kubbadda birta ... bacda sandman ee adag ayaa la xirayaa.
Sida loogu isticmaalay USS / Rasmiga Rasmiga ah ee Ciyaaraha / Ultimate Strongman / Giants Live tartamada.
1.Color: madow, casaan, cagaar ciidan, buluug, jaalle, bunni, camo fudud, camo madow.
2.Material: 1050D Cordura, 100% nylon.YKK jiinyeer
3.Dimension: 41 dhexroor ama 16 "
4.Custom Size: 20kg-200kg, 50lb-400lb
5.Filler bag leh furitaanka funnel
6.Will markab madhan oo aan wax buuxin ah.
Astaanta 7.Custom ee 1pc qty.
8.Printing logo, logo daabac ayaa la heli karaa
Hore: Katiinad ciid ah
Xiga: Bacda tuurista Strongman
Katiinad ciid ah
Dambiisha Duufaanta Xooggan ee Duufaanta
Bacda ciida ee Strongman
jimicsiga sled 1